createrboy၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
အာဝဇ္ဇန်းဒွိ အကြောင်း အမေး
သဂြိုလ်(၉) ပိုင်းရဲ့စိတ်ပိုင်းမှ အဟိတ်ကြိယာစိတ် သုံးပါးတွင် (ကြိယာစိတ်သည် ရဟန္တာတို့ မှာသာဖြစ်သည်ဆိုလျှင်) ပုထုဇဉ်မှာလည်းဖြစ်တဲ့ အာဝဇ္ဇန်းဒွေ ကို ဘာလို့ ကြိယာစိတ်လို့ မှတ်တာလဲ မသိလို…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
ပရမတ် အစစ် ဖြစ်သော ပထဝီဓာတ် တစ်လုံးအကြောင်း.........
Started မေ 30, 20110Replies0Likes
ကျွန်တော်အခု အရှင်ဇဝန (မေတ္တာရှင် ၊ ရွှေပြည်သာ ) ရဲ့ မဂ်တားဖိုလ်တား အန္တရာယ်များ စာအုပ်ထဲမှာဖောပြထားတဲ့ပရမတ်အစစ်ဖြစ်သော ပထဝီဓာတ်ရဲ့ သဘောကို စာရှည်သွားမှာစိုးလို့အကျဉ်းချုပ် ကောက်နှုတ်တင်ပြမှာ…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
ဝိပဿနာတရား အားထုတ်ရာတွင် ပါရမီအား လွှဲချရန်မလို။
Started မေ 28, 20110Replies2Likes
ဒီစာကို ကျွန်တော် အရှင်ဇဝန (မေတ္တာရှင်၊ ရွှေပြည်သာ) ရဲ့မြန်မာတို့ ၏ အသက် စာအုပ်မှ ကောက်နှုတ်တင်ပြတာပါ ။ ပထမဆုံး ကျွန်တော် အဲဒီစာအုပ်ထဲကမြတ်စွာ ဘုရားဟာ ဒါန ၊သီလ ၊ သမထ ဘာဝနာ တို့ သာ လုပ်ပြီး ဝိပဿနာ…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
ပုဂ္ဂိုလ်, သတ္တဝါ , ငါ , သူတပါး ဟူ၍ မရှိလျှင် ဒုစရိုက် အတွက်ဘယ်သူတာဝန်ရှိသနည်း............
Started this discussion. Last reply by အောင်အောင် Feb 26, 2012.5Replies0Likes
အမေး။ ။ ပုဂ္ဂိုလ်, သတ္တဝါ , ငါ , သူတပါး -ဟူ၍ ခြားနားခြင်းမရှိလျှင် ဒုစရိုက်အတွက်မည်သို့တာဝန်ရှိနိုင်မည်နည်း ?အဖြေ ။ ။ ပုဂ္ဂိုလ် , သတ္တဝါ , ငါ , သူတပါး -ဟူ၍ ခြားနားခြင်းမရှိဟူသောစကားသည် ပရမတ္တဒေသနာ၏…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
phyuthi သည်createrboyကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
chityethu liked createrboy's video
မင်းဂျွန်စိုး - ဆက်ရန်ရှိသေးသည်.................!
ခေ၇ liked createrboy's video
phyuthi liked createrboy's video
A BuddhismworldAdmin liked createrboy's video
createrboy သည်စိုးလေး's ၏ 'ဓမ္မခန္ဓာ(၈၄၀၀၀)က ဘာတွေလဲ ?' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
createrboy postedavideo
"ဆက်ရန်ဘဝတွေရှိသေးသည်....."ဆိုတဲ့ စာသားလေးတော့ ပိုကြိုက်တယ်။
createrboy သည်thein wai's ၏ 'ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ ဘုရား၊ ရဟန္တာဓာတ်တော်ဟူသည်။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
createrboy သည်မူကြိုဆရာ's ၏ 'အနိစ္စေ ဒုက္ခသညာ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
createrboy သည်nyansoe's ၏ 'ကမ္မဋ္ဌာန်းလေးဆယ်နှင့်စရိုက်ခြောက်ပါး တွဲစပ်ပုံ။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
createrboy သည်ဉာဏ်လင်းမြို့'s ၏ '"ရှုထောင့် အဖြာဖြာ ၀ိပဿနာ ဉာဏ်စဉ်များ(၁၃)" ( ၁၃။ ဂေါတြဘူ​ ဉာဏ်)' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
createrboy သည်nyansoe's ၏ 'ဓာတ်(၈)ပါးအကြောင်း(အဝိနိဗ္ဘောဂရုပ်စု)' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ရွှေရခိုင် commented on createrboy's video
ရဟန်းဘ၀သို့ ကူးပြောင်းသွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဘ၀ဇာတ်လမ်း
+ သည်createrboyကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"ချစ်သှူုငယ်ချင်းလေးရေ ယခုကျရောက်သောမွေးနေ့လေးမှစပြီး နောင်နှစ်ပေါင်းရာကျော် တိုင်အောင် ပျော်ရွှင်မှု့အပေါင်း သရဖူဆောင်းနိုင်ပါစေ သူငယ်ချင်းလေးစိတ္တသုခ ကာယသုခနှင့်ပြည့်စုံပါစေနော် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မွေးနေ့လက်ဆောင် နောက်ကျခဲ့သည်ရှိသော်…"
nayhlwar commented on createrboy's video
"ဘ၀ဆိုတာလမ်း သုဿာန်ဆိုတာကမ်း ဒါကြောင့်ဇာတိဇရာများမလှမ်းခင် အထုပ်ထမ်းကာ ပြင်စမ်းပါလော့ နေ(မြင်းခြံ)"
Added by createrboy0Comments4Likes
Added by createrboy 8 Comments3Likes
Added by createrboy0Comments 1 Like
ဒီဘလော့ကို ဇွန် 17, 2011 တွင်8:30pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။6Comments4Likes
၄။ ရှုမှတ်စိတ်မှာ လောဘ, ဒေါသ, သောက မပါမှ ရှုမှတ်စိတ်ဖြစ်မယ်… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
8:50pm အချိန်ဇန်န၀ါရီ 15, 2016, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
8:24pm အချိန်ဇန်န၀ါရီ 15, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
1:10pm အချိန်ဇန်န၀ါရီ 15, 2013, တွင် + မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ချစ်သှူုငယ်ချင်းလေးရေ ယခုကျရောက်သောမွေးနေ့လေးမှစပြီး နောင်နှစ်ပေါင်းရာကျော် တိုင်အောင် ပျော်ရွှင်မှု့အပေါင်း သရဖူဆောင်းနိုင်ပါစေ သူငယ်ချင်းလေးစိတ္တသုခ ကာယသုခနှင့်ပြည့်စုံပါစေနော် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မွေးနေ့လက်ဆောင် နောက်ကျခဲ့သည်ရှိသော် ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးရန် အနူးအညွတ် တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။
11:11am အချိန်ဇန်န၀ါရီ 15, 2012, တွင် စန္ဒာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
၁၅.၁.၂၀၁၂ တွင်ကျရောက်သော မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်
6:40am အချိန်ဇန်န၀ါရီ 15, 2012, တွင် နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
11:06pm အချိန်ဇူလှိုင် 26, 2011, တွင် A BuddhismworldAdmin မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
10:03pm အချိန်မေ 16, 2011, တွင် စန္ဒာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။